. Weihai tonglian ngqo oomatshini co, Ltd ise kwisixeko esihle unxweme - Weihai isixeko kwiphondo Shandong. specialising ekuvelisweni lokuloba, izixhobo yegalufa yokuvelisa, kunye ukwandiswa ngempumelelo yophuhliso ezinkulu zeglasi tube ububanzi, omnye carbon kushishino ityhubhu umthamo nezixhobo yokubumba entsimini. Ngelo xesha axhasayo ngumngundo ezahlukeneyo core, izincedisi zesinyithi kunye nentonga zokuloba ezikumgangatho ophezulu.
Le nkampani, ukususela mhla yasekwa ngo-2001, emva kokuba imvula nomoya uhlamba, tempering, umgangatho imveliso ethembekileyo kunye nemfezeko igama wenkonzo, ukuze abe yinkokeli eyona yobungcali. Product kakhulu-bethengisa lizwe kwaye zithunyelwa eJapan, eFransi, eSiriya, India, Vietnam, Taiwan kunye namanye amazwe kunye nemimandla, isabelo lorhwebo lamashishini eziphezulu.
intando Tonglian ukubuyela ekukhuliseni "Tong Lian" kukhule kancinane.l kumhlaba ochumileyo le nomqondo apha, kunye neemveliso ezintsha, Obusemagqabini ubunjani ingqiqo nkonzo omtsha, inkonzo kwishishini lokuloba wasekhaya kunye namanye amashishini edityanisiweyo umbhobho umenzi, ukuba kunyuswe kuphuhliso ushishino!